musha AFRAN FOOTBALL STORI Nigerian Nhabvu Vatambi Samuel Chukwueze Upwere Hwenyaya Iyi Nhau dzeS Untold Biography Facts
LB inopa nyaya yeiye Mutambi webhola anonzi "SAMU". Iyo yakazara iyo yekufukidzira yaSamuel Chukwueze Nyaya Yehudiki, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva panguva yaakange ari HAPANA BODY kusvika paakazova a Celebrity.
Hwepakutanga Hupenyu uye Kukura kwaSamuel Chukwueze. Twitter, Chinangwa, Gistmania uye Autojosh.
Ehe, munhu wese anoziva nezve yake yakananga kurovera uye kutsunga. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoona shanduro yedu yeSamuel Chukwueze's Biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Kutanga kubva, Samuel Chimerenka Chukwueze akazvarwa musi wa22 Chikumi May 1999 kuguta reUmuahia muAbia State, Nigeria. Ndiye wekutanga pavana vatatu akazvarwa kuna amai vake vadiki vanozivikanwa uye baba.
Sangana nemumwe wevabereki vaSamuel Chukwueze. Mifananidzo Credits: TheSun.
Nyika yeNigerian yerudzi rweIgbo ine madzitateguru emhuri yeWest Africa akakurira mumhuri yepakati gadziriro yepamusha pakuberekerwa muguta reUmuahia kwaakakurira pamwe chete nemunin'ina wake uye hanzvadzi.
Mudiki Samuel Chukwueze akakurira muguta reUmuahia kuNigeria. Image Credits: WorldAtlas uye Twitter.
Kukura Umuahia, mudiki Chukwueze aive nemakore mashanu chete paakadanana nhabvu nekuona achiri mudiki Idol Jay-Jay Okocha kutamba uye kuratidza hunyanzvi hwekunyora mumitambo yeterevhizheni. Chukwueze achiri pazviri, akafungidzira nezvekuridza padivi pechidhori chake uye nemamwe ma greats ebhola mune ramangwana.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Sezvo makore akafamba, Chukwueze akatanga kuwaniswa mari mukutamba nhabvu zuva rega rega, chiitiko chaakaedza chose kusanganisa nekufunda kuHurumende College Umuahia uye gare gare Evangel Sekondari. Iye mutambi akacherechedzwa nhabvu nhabvu yaizobvuma makore apfuura kuti akabayira moyo asingafariri paartari yekutamba nhabvu. Zvinoenderana naye:
"Ndakanga ndiri mudzidzi anokwanisa, asi kuda kwangu bhora kwakapedzisira kwasara kufunga kwangu apo kufarira kwangu kudzidza kwakadzikira."
Iko kukura hakuna kufamba zvakanaka vabereki vaChukwueze nababamunini avo vakaita zvese zvavaigona kuti vamuise akananga pakudzidza. Muchokwadi, vakambopisa bhutsu yaChukwueze'S pamwe nemakiti ekudzidzira kuenda kumba kwakakura sei asi mukomana mudiki aive atozvipira kuridza nhabvu.
Burning Chukuweze bhutsu yakanga isiri padyo zvakakwana kuti imudzivise pakutamba nhabvu. Mifananidzo Credits: Youtube uye Twitter.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Zvisinei nevabereki vaChukwueze vasingatsigire nhabvu yake, mukomana uyu akaramba achitamba mitambo yechikoro yaakafunga kuti inogona kukurumidza kuzadzikiswa kwechiroto chake chekuva nyanzvi yenhabvu. Taura zvezvikoro, Chukwueze akatanga kutanga neFutare Hope U-8 & U-10 timu nguva refu asati ava mudzidzi wepamusoro.
Mutambi wenhabvu uyo ​​akaenderera mberi nekudzidzira kwenguva pfupi neNew Generation Academy akazobatana neDiamball Academy muna 2012 uye akaumbwa kuti ave mukwikwidzi anokunda. Yaive kuDiamondi Academy iyo yakaita kuti Chukwueze ive chikamu chechikwata chavo chakaenda kumutambo we 2013 wePortugal wechidiki Iber Cup iyo yavakakunda naChukwueze achive mukombe wemakwikwi epamusoro soro.
Makwikwi evechidiki e 2013 Iber Cup akahwinwa neDiam Academy Academy neChukueze achibuda semutambi wepamusoro svomhu. Image Credits: Twitter uye Chinangwa.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Makore maviri gare gare, Chukwueze akasvikika shanduko mune yake shuviro yezvaakawana paakawana nzvimbo muNigerian kirabhu iyo yakakunda mukombe wepasi rose weFIFA weU2015 muChile, chiitiko chakaratidzawo vechidiki vakaita Trent Alexander-Arnold, Eder Militao uye Christian Pulisic. Kutevera mukombe wake wepasi rose, Chukwueze akatanga kukwezva zvido kubva kuzvikwata zvakati wandei zveEurope.
Chukwueze ane makore gumi nematanhatu aive chikamu chimwe chechikwata cheNigeria chakahwina mukombe wepasirese weFIFA wegore ra16 kuChile. Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter.
Akashanyira zvaifarira zveSalzburg, PSG, Porto nepo Arsenal yakanyatsosvika pakubata naye muhurongwa hwavo hwehudiki. Nekudaro, wechidiki akazvipira kuVillarreal izvo zvakamuitira nani uye Dhijitari nhabvu academy. Pakusvika kuVillarreal, Chukwueze akapedza mwedzi achitambudzika nezvipingamupinyi zvemutauro uye achijaira chikafu cheSpanish asi haana kumbobvumidza zvaimunetsa kuti zvimuvhiringidzire kubva pakumushamaridzana nechikwata cheVillarreal's Juvenil A.
"Ini ndakanga ndisingazivi kuti chii chandaidyiswa ini pandakasvika, Villarreal." Nyama… Yaive neropa kwese! Ndakatamburawo kunzwisisa Spanish ndisati ndatombofunga kuzvitaura. ”
Anoyeuka Chukwueze wemazuva ake ekutanga kuVillarreal.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Pasina chinguva Chukwueze apedza kuita danho repamusoro reVillarreal muna Kubvumbi 2018, akaonekwa mumutambo wekirabhu kekutanga munaGunyana gore rimwe chete iro ndokuenderera mberi achizvimisa semutyairi anotya nekupedza zvakanaka zvekuti akafananidzwa nenhabvu yenhabvu. Arjen Robben.
Samuel Chukwueze anozivikanwa nekuda kwake kwakananga kuoma uye kutsunga. Mufananidzo Wemifananidzo: Pulse.
Chukwueze akazopedzisira abudirira kuita rimwe gore paakazova chikamu chechikwata cheNigeria chakahwina bronze pa2019 Africa Cup of Nations. UEFA akamunyorawo semumwe wevadiki makumi mashanu kuti vaone munyika yenhabvu mwaka mumwe chete. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Relationship Life Facts
Kuenderera mberi kune hupenyu hwaSamuel Chukwueze, winger inogona kunge isina kuroorwa panguva yekunyora iyi bio. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti haana kuonekwa chero runako rweSpain kana rwekuNigeria runogona kunzi semusikana wake.
Mudiki, akabudirira uye anoshanda nesimba Samuel Chukwueze haana kuroora panguva yekunyora iyi biography. Mifananidzo Credits: LB uye Autojosh.
Zvikonzero nei Chukwueze asina musikana anozivikanwa haagone kuve asina kubatika nenyaya yekuti angori nemwedzi mishoma ruzivo achitamba nhabvu yepamusoro. Nekudaro, ari kutora nguva yakawanda uye kushanda nesimba kuti atore basa rake rakakura kusvika kumusoro.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Mhuri haina kungova yakakosha kuna Chukwueze, ndozvese kune uyo anokunda. Tinokuunzira chokwadi pamusoro pemhuri yemhuri yaChukwueze pamwe chete nerondedzero inowanikwa yedzinza rake.
Nezve baba vaSamuel Chukwueze naamai: Vabereki vaChukwueze havazivikanwe nemazita avo panguva yekunyora iyi bio asi zvisiri zvakanyanya kuzivikanwa nezvemidzi yemhuri yavo. Nekudaro, iye muhwina akambotaura kuti baba vake mushumiri waMwari amai vake vachiri mukoti kubva achiri mudiki. Vabereki vese vari vaviri vaitanga kurwisa nhabvu yaChukwueze nhabvu asi havana sarudzo yekumupa makomborero avo asati aenda kuPortugal kumutambo we 2013 wePortugal wechidiki Iber Cup.
Amai nemwanakomana wavo wekutanga mune inodziya pikicha inotaura zvakawanda zvehukama hwavo hwerudo. Mufananidzo Wemifananidzo: TheSun.
About Samuel Chukwueze hama nehama: Chukwueze ndiye wekutanga wevana vatatu akazvarwa kuvabereki vake. Ane munun'una uye mukoma uyo anozivikanwa zvishoma nezvake panguva yekunyora. Zvakare kana zvinyorwa zvavo zvekutateguru vake kunyanya ivo veanasekuru nasekuru naambuya nasekuru nasekuru. Zvimwechete na babamunini vaChukwueze, babamunini uye hama dzemukoma hazvizivikanwe apo muzukuru wake nanasekuru vake vachiri kuzozivikanwa panguva yekunyora.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Personal Life Facts
Kure kubva kuChukwueze on-pitch penchant yeanotyisidzira vadziviriri, ane hunhu hwakafanana nehwekumunda hunomuratidzira sewe pasi pasi, anoshanda, akanaka uye ari nyore kuenda. Kuwedzerwa kune mutsva weChukwueze mafungiro ake maitiro ekusataridza zvakawanda nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwega.
Iye winger uyo anotungamirwa neAries Zodiac sign inoshanda mune dzinoverengeka zviitiko izvo zvinopfuudza nekuda kwekufarira kwake uye kuita zvemitambo. Izvo zviitiko zvinosanganisira kutamba mitambo yemavhidhiyo, kuteerera mimhanzi pamwe nekushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Mumhanzi chikafu chemweya waChukwueze. Ari mumufananidzo pano achinakidzwa nemimhanzi ari pane chimwe chikepe. Mufananidzo Wekodhi: Gistmania.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle Facts
Nezve mashandisiro anoita Samuel Chukwueze uye kushandisa mari yake, mari yake yemubhadharo iri kucherechedzwa panguva yekunyora asi iye aine musika kukosha kwemakumi matatu emamirioni uye anotambira zvakanyanya mumabhadharo uye mubairo wekutamba muchikwata chekutanga chaVillarreal.
Nekudaro, winger inorarama hupenyu hwoumbozha sezvinoonekwa nemashandisiro ake emari. Kunyangwe kukosha kwefurati kana imba iyo Chukwueze achigara mairi zvisati zvave kuzivikanwa, mota dzake dzinotutumadza dzemhando yepamusoro Mazda MX-5 Miata Convertible kukwira kwaanoshandisa kuwana nzira yake yakatenderedza Spain.
Samuel Chukwueze achitsvaga pfuti pamotokari yake Mazda MX-5 Miata Convertible. Mufananidzo weKwereti: Autojosh.
Samuel Chukwueze Husikana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Kugumisa yedu Samuel Chukwueze nyaya yehucheche uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana Untold chokwadi nezve winger.
Chitendero: Samuel Chukwueze akaberekerwa mumhuri yeChristian uye akakurira mukuwirirana nezvisungo zvekutenda kwechiKristu. Kunyangwe hazvo izvo zvisingaendi zvekunamata panguva yekubvunzurudzwa, anotendwa kwete muKristu asiri wekupokana.
Tattoos: Iyo winger - ine urefu hwemamita mashanu, masere mainji - haina hunyanzvi hwekuita muviri panguva yekunyora iyi biography. Nekudaro, hapana kuramba mukana wekuti anogona kuwana ma tattoo kana achinge azvimisa pakati peanonakisa vafambi venhabvu.
Mufananidzo woratidza kuti Samuel Chukwueze haasati ane ma tattoos parizvino. Mufananidzo Wekodhi: Gistmania.
Kusvuta uye kunwa: Vabereki vaSamuel Chukwueze vakaita kuti arege kubva pachiitiko chekunwa uye kuputa. Haana kumbobvira abatwa achinwa kana kusvuta kamera. Tichifunga nezve kwaakabva, zvine chokwadi chekuti Winger aisazoita chiitiko chinokuvadza icho chinogona kukanganisa basa rake.
CHOKWADI CHINOGONA: Ndinotenda ne kuverenga yedu Samuel Chukwueze Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.